Liinta Cake Recipe ka xoq + video Tutorial - Keega
Liiska Cake Liinta
Lemon Buttermilk Cake Oo Lagu Dhigay Liin Macaan Oo Guriga Lagu Sameeyo Iyo Zesty Lemon Buttercream
Waan dhammaystiray tan karinta keega muddo sanado ah ilaa aan si sax ah u helay. Sirta ku jirta muuqaalkan jilicsan iyo dhadhanka liinta ee saafiga ahi waa liin dhanaan badan, caano subag iyo adeegsiga liin dhanaan buuxinta iyo gudaha fudud buttercream ! Cuntadan keegga liinta ah runti waa riyo jecel liinta!
Waxaan si daacad ah ugu fikiray inaan necbahay keegga liinta waqtiga ugu dheer. Waqti kasta oo aan liin dhanaano wax uun si fiican uma fadhiyin. Waxaa ii soo baxday kaliya waxaan necbahay dhadhanka liinta ee been abuurka ah. Waxay i xasuusisaa dhibcaha qufaca. Ma ahan sida saxda ah ee aan ku raadinayo keega liinta.
Ka dib markaan bartay sida wax looga dubto xoqida iskuulka digaagga, waxaan go aansaday inaan keega vaniljigayga la qabsado keega liinta. Omg maxaa farqi ah! Keegga liinta ayaa hadda si rasmi ah uga mid ah dhadhanka aan ugu jeclahay keegga. Hadaad jeceshahay liinta sidaan anigu jeclahay, iska hubi tayda keega raspberry cake iyo aniga keega buluugga ah !
Maxaa keega liin dhanaantaani ka dhigay mid qoyan?
Cuntadan keegga liinta, aad ayey ugu egtahay cuntooyinka kale ee keega sida keega vanilj iyo cad caano jilicsan oo jilicsan keegga wuxuu leeyahay maaddooyin muhiim ah oo loogu talagalay qoyaanka ugu badan iyo maqaarka jilicsan ee afkaaga ku jira.
Caano subag - wuxuu kala jebiyaa gluten-ka ku jira burka keega wuxuuna ku falceliyaa maaddooyinka aashitada leh si loo abuuro keeg aad u fudud oo qalafsan oo aad u jilicsan!
Bur cajiin ah - rootiga keega ayaa ku jira wax ka yar gluten marka loo eego burka AP, taasoo ka dhalanaysa keega aad u jilicsan. ** xusuusnow, ma sameyn kartid khiyaanadaas meesha aad ku beddesho daqiiqda AP budada galleyda ah ama waxaad ku dambayn doontaa rootiga hadhuudhka.
Habka isku qasida - Habka isku-darka gadaal waa habka lagu marsado walxahaaga qalalan subag ka hor intaadan ku darin cabitaannada. Subaggaani 'wuu gaabiyo' qaybaha gluten wuxuuna siinayaa keega waa jajabka jilicsan.
Saliid - Aad ayey muhiim ugu tahay keega dufanku inuu ka ilaaliyo in keegaagu qalasho. Marka keega uu qabow yahay, subagga ku jira keega wuu adkaadaa wuxuuna ka dhigi karaa keegga dhadhanka mid qalalan. Keega waa in had iyo jeer lagu cuno heerkulka qolka natiijooyinka ugu wanaagsan.
Waa maxay habka ugufiican ee loogu daro dhadhan liin badan khudradda liin dhanaanta?
Keeggan liinta ah wuxuu ka helaa liin dhanaanta liin dhanaan badan, liin dhanaan iyo xoogaa soosaarid ah keega digaagga. Waad soo jiidan kartaa xarkaha haddii aad rabto dhadhan liin dheeri ah ama ku dar 1/4 liin dhanaan ilaa keega dufanka kuwa liinta jecel ee halkaas jooga (aniga oo kale). Xitaa waxaan ku isticmaalay saliid liin ah subagayga laakiin aad buu qaali u yahay.
Keegga liinta ayaa sifiican ula socda dhadhammo badan laakiin gaar ahaan miraha kale! Waxaan jecel nahay liinta buuxinta kanaga karinta keega strawberry ama ku buuxi miiska rootiga liin dhanaanka ah xoogaa yummy ah marion berry buttercream !
Qiyaas intee le'eg ayaad u isticmaali kartaa karinta liistada keega ah?
Keeggan liinta ah waxaa loo isticmaali karaa digsi kasta oo cabbirkiisa ah. Hal rooti oo keeg ah ayaa sameyn doona seddex lakab 6 6 x2 ″ ama labo lakab oo ah 8 ″ x2 2. Waxaan u muuqdaa inaan ahaado digsi dabadheeraad ah oo digaag badan maxaa yeelay waxaan jeclahay lakabadayda keega inay dhererkoodu dhan yahay 2 full. Buuxi weelkaaga keega 3/4 ee wadada oo buuxa (ama qiyaastii 1/2 ″ oo boos ah oo u dhexeeya dusha dusha sare ee keegga iyo dusha digsiga.
Lakabyada keega ee 12 ″ ama ka weyn, waxaan u isticmaalaa a udub dhexaadka kululaynta . Xudunta kululaynta waxay ka caawisaa bartamaha keegga si dhakhso leh si aysan geesahaaga u engejin. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa ciddiyaha ubaxa haddii aadan haysan udub-dhexaadka kululaynta. Waxaad sidoo kale laba jibaari kartaa isla markaana saddex jibaari kartaa cuntadan adigoon sameyn wax hagaajin ah.
Cuntadan keega liinta ma u fiican tahay keega?
Waad u rogi kartaa cuntooyinka keega badankood koobabka laakiin ka tag saliidda maadaama ay ka dhigeyso koobabka keega mid aad u dufan badan. Keega oo dhan looma turjumi karo keega sifiican. Kuwani waa tallaabooyinka aan u adeegsado inaan ku tijaabiyo keegga keega ee keega.
Kuleyli foornadaada ilaa 400ºF.
Buuxi safkaaga 2/3 ee wadada oo buuxa (qiyaastii 3 qaado oo keega rootiga). In ka badan buuxinta qalabkaaga ayaa sababi kara inay buuxsamaan oo ay dumaan.
Keega ku duba koobabka 5 daqiiqo ka dib yaree heerkulka ilaa 350ºF. Tani waxay ka caawineysaa dejinta qubbad.
Sii wad dubista keega keega 12 daqiiqo oo dheeri ah oo hubi xarumaha. Haddii ay weli jilicsan yihiin oo aan la dhigin, sii wad dubista. Kukiyada badankood waxaa la sameeyaa inta u dhexeysa 18-25 daqiiqo.
Mar alla markii koobabkaaga keega la dhammeeyo, foornada ka qaad foornada oo u daa inay ku qaboojiyaan xarigga siligga 10 daqiiqo ka hor intaadan ka bixin dheriga keega.
Kormeer natiijooyinkaaga. Haddii koobku uusan kor u kicin, ku dheji qashin dheeraad ah waqtiga soo socda. Hadday si xad dhaaf ah u qulqulayaan, wax ka yar geli. Xusuusnow intee in le'eg ayay qaadatay in la dubo koobabka.
sida loo sameeyo keeg cagaaran
Isticmaal safafka aan caddeyn-u-lahayn si ay uga caawiso la dagaallanka safafka inay noqdaan kuwo hufan ka dib dubista.
Ma jiraa beddel lagu soo saaro liinta?
Haddii aadan haysan wax liin dhanaan ah, kaliya kuma beddeli kartid liin dhanaanta. Liin dhanaanta ma laha tan tan oo dhadhan liin ah inaad inbadan isticmaasho mooyee. Liinta laga soosaaray ayaa ah isku urursi sare oo dhadhan liin ah oo lagu qasay aalkolo taas oo uumi baxeysa ka tagista dhadhanka liinta. Haddii aad raadineysid beddelka soosaarida liinta, ku darista 1 tsp ee liin dhanaanta dheeriga ah ayaa noqon laheyd xulasho wanaagsan.
Liinta buuxinta liinta
Curdiyada liinta ayaa ah hab aad u fiican oo lagu daro xoojinta dhadhanka liinta ee keegaaga liinta. Waa hubaal inaad iibsan kartid curdanka liinta laakiin sababta markii loo sameynayo ay u fududahay oo u dhadhamayso SIDAA INOO BADAN.
Haddii aad ku cusub tahay sameynta curd, geedi socodku waa iska fudud yahay. Asal ahaan, waxaad isku darsameysaa casiir (sida liin dhanaan, liin dhanaan, liin iwm) sokor oo ku shub biyo kululeeyaha leh jaallo ah illaa uu ka weynaanayo. Tani waa habka ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo wixii ukunta ukunta haraaga ah ee aad dul dhigeyso haddii aad dhawaan sameysay keeg cad ama meringue.
Xeeladdu waa in la hubiyo in curdku gaadho 170ºF si ay u fiicnaato oo u dhumuc weynaato. Haddii ay dhibaato kaa haysato helitaanka curdadu inay ahaato mid qaro weyn, isku dar 1 qaadoon oo ah hadhuudh galley ah 1oz oo biyo qabow ah kuna walaaq ilaa ay ka siman tahay. Ku dar maraqa hadhuudhka galleyda marawaxadda oo sii wad kuleylka ilaa ay ka weynaato.
Curd-kaaga ku shub baaquli oo ku dabool dabool balaastig ah (hubi in caaggu uu taabanayo dusha sare ee curd) una oggolow inuu ku qaboojiyo qaboojiyaha habeen kahor intaadan isticmaalin.
Sida loo sameeyo liinta subagga fudud
Waxaan go aansaday in aan ka sameeyo nooc liin dhanaan ah oo ah buttercream fudud oo aan ku kariyo liistada keega. A jiiska qaboojiyaha farmaajo sidoo kale noqon lahaa gabi ahaanba delicious. Sirta ah sameynta liin dhanaanta liinta ayaa ah in la hubiyo inaad isticmaasho lifaaq yar si aad ugubilaabato. Looma baahna in la keeno maaddooyinka heerkulka qolka. Kaliya isku dar ukunta cad ee la kariyey iyo sonkorta budada ah kuna kar kar korka sare ilaa 2-3 daqiiqo. Yaree xawaaraha hoose kuna dar meelahaaga jilicsan ee subagga, milix, iyo soosaarida.
Kordhi xawaaraha isku-darkaaga si aad u sarayso una ogolow karbaash illaa uu ka noqdo mid aad u fudud oo kareem leh. Tani waxay qaadan kartaa 10-15 daqiiqo iyadoo kuxiran mashiinkaaga. Sii subaggaaga subag dhadhanka, haddii ay aad u dhadhamayso subag, sii wad karbaashka.
Mar alla markii buttercream-kaaga uu fiicanyahay oo qalafsan yahay waxaad ku dari kartaa liin dhanaantaada oo waxaad u beddeli kartaa shaashaddaada daboolka lifaaqa. Isku qas si hoose illaa 10 daqiiqo oo kale si aad uga saarto xumbo oo aad uga dhigto subagaaga subag mid fiican oo siman.
Sida loo sameeyo keega lakabka liin dhanaanta liin dhanaanta ah
Markii ugu horeysay samaynta keeg? Ila daawo sida loo sameeyo samee keeggaaga ugu horreeya casharro si aad wax uga barato dhammaan isku-darka iyo buuxinta keegga habka xirfadeed.
Waan jeclahay dubo lakabkeyga keega liinta maalinta ka horreysa ee aan u baahanahay si aan u nasiyo. Ku duub duub balaastig ah oo ku dhaaf sariirta dusheeda habeenkii laakiin sidoo kale waad ku qaboojin kartaa si ay u fududaato.
Aniguba Samee liin dhanaan maalin ka hor Waxaan u baahanahay inay siiso wakhti ay ku qaboojiso. Hubso inaad ku daboosho dusha sare ee liin dhanaantaada maro balaastig ah si ay u taabato dusha sare si looga hortago maqaar aan caadi aheyn inuu sameysto.
Waad sameyn kartaa subag-biyoodka maalin kahor ama maalinta. Waxaan sameeyaa maalinta si ay u fiicantahay oo siman tahay. Ku dar qiyaastii 1 koob oo ah liin dhanaantaada subaggaaga oo leh 1 tsp oo laga soosaaray liinta iyo xoogaa liin dhanaan ah haddii la doonayo. Isku qas ilaa intaad ka jilicsaneyso.
Ka jar geesaha bunni ah hareeraha dushooda, gunta, iyo dhinacyada keega si loogu sameeyo jeex ka samaysan qurxoon. Looma baahna laakiin haddii aad tahay qof dhammaystiran sida aniga oo kale, markaa ma doonaysid inaad seegto tallaabadan.
Dhig keeggaaga kartoonka wareega oo ka shaqee meeris u roonaanta. Abuur biyo xireenka buttercream agagaarka banaanka lakabkaaga koowaad ee keega. Ku buuxi xarunta qiyaastii 1/4 ″ ee liin dhanaanta oo siman. Ku celi lakabka labaad ee keega.
Jajabi jaakadaada leh lakab khafiif ah oo subag ah iyo qabow habeenkii ama qaboojiyaha ilaa 1 saac.
Ku dhammee keeggaaga jaakadda ugu dambeysa ee buttercream iyo ku qurxin xoogaa liin dhanaan ah loogu talagalay dhibcaha iyo liinta cusub ee la jarjaray.
Cunto qoyan oo liin dhanaan ah oo leh liin macaan iyo liin dhanaan! Loogu jecel yahay liinta runta ah! Waqtiga Diyaarinta:shan iyo toban daqiiqado Waqtiga karinta:35 daqiiqado Wadarta Waqtiga:Afar. Shan daqiiqado Kalori:520kcal
Liin macaan Cake
▢13 ounces (368 g) Bur cajiin ah
▢13 ounces (369 g) sonkorta granulated
▢laba qaaddo shaaha (laba qaaddo shaaha) budada dubista
▢1/2 qaaddo shaaha (1/2 qaaddo shaaha) Fixiso
▢8 ounces (227 g) subag aan cusbo lahayn Jilicsan laakiin aan dhalaalin
▢10 ounces (284 g) caano subag Ama caano caadi ah oo lagu daray 1 Tbsp oo khal cad ah
▢3 ounces (85 g) saliidda cuntada Ama saliida canola
▢3 Weyn (3 Weyn) Ukunta 1 ukun oo miisaankeedu dhan yahay 1.67oz
▢1 Miisaska cuntada (1 Miisaska cuntada) Liinta Zest Qiyaastii hal liin
▢laba qaaddo (laba qaaddo) Liinta laga soosaaray
▢laba Miisaska cuntada lagu kariyo (laba Miisaska cuntada lagu kariyo) Casiirka Liinta Cusub ama dhalo waa caadi
▢8 ounces (227 g) Casiirka Liinta Cusub ama dhalo waa caadi
▢6 ounces (170 g) Sonkorta dahaaran
▢5 (5) Ukunta ukunta
▢4 ounces (113 g) Subag aan cusbo lahayn
▢1 Miisaska cuntada galleyda
▢3 Miisaska cuntada lagu kariyo biyo qabow
▢8 ounces (227 g) Ukunta Pasteurized Waxaa laga heli karaa qaybta ukunta ee kartoonka, badiyaa shelf sare
▢32 ounces (907 g) Subag aan cusbo lahayn Jilicsan laakiin aan dhalaalin
▢32 ounces (907 g) Sonkor budada ah
▢4 ounces (113 g) Liin Dhanaan
Tilmaamaha Cake Liinta
Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay inaad Ogaato Kahor Intaadan Bilaabin 1. U soo qaado dhammaan waxyaabaha aad ka kooban tahay heerkulka qolka ama xitaa xoogaa diiran (ukumo, caano subag, subag, iwm) si loo hubiyo in dubkaagu uusan jebinayn ama uusan curricamaynayn. 2. U isticmaal cabir miisaankaaga si aad u miisaamto maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareerayaasha) haddii kale haddii aan si kale loo farayn (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada. 3. Layliska Mise en Place (wax kasta oo meesha ku jira). Cabbiro maaddooyinkaaga ka hor wakhtiga oo diyaari iyaga ka hor inta aanad bilaabin isku-darka si loo yareeyo fursadaha si shil ahaan wax uga tagi kara. 4. Qabooji keegaaga kahor dhaxan iyo buuxin. Waad ku daboolan kartaa keega barafoobay oo la qaboojiyey si wanaagsan haddii aad rabto. Keeggan sidoo kale waa u fiican yahay isugeynta. Had iyo jeer waxaan ku hayaa keegayaga in aan ku qaboojiyo qaboojiyaha ka hor intaan la keenin si aan u raro.
Kuleyli foornadaada ilaa 335º F / 168º C Ku diyaari weelkaaga keega miro goyn ah ama sii daayo digsi kale. Weelalka laba jibbaaran ama keega ka weyn 12 ', waxaan sidoo kale u isticmaalaa xaashi.
Isku darka 4oz ee caano subagga leh saliidda oo dhinac iska dhig.
6oz haray ee caano-caano ah, ku dar ukumo, liin dhanaan, liin dhanaan, iyo liin dhanaan. Si tartiib ah u afuuf si aad ukunta u jebiso oo aad dhinac u dhigto.
Ku rid bur bur ah, sonkor, milix, budada dubista, iyo soodhada ku rid weelka dhajiskaaga istaaga oo ku lifaaqan lifaaqa suufka.
Mashiinka ku wareeji xawaaraha ugu hooseeya. Ku dar subaggaaga jilicsan ee isku-darka jajabyada yaryar illaa inta isku-darka burka u eg yahay ciid aan dhab ahayn.
Isku dar saliidaada / caanahaaga isku mar hal walxaha qallalan iskuna walaaq dhexdhexaad (xawaaraha 4 ee KitchenAid) 2 daqiiqo oo buuxa si aad uhormariso qaabka keegga.
Xaaqin baaquli. Tani waa tallaabo muhiim ah. Haddii aad ka boodo, waxaad ku dhex yeelan doontaa buro adag oo bur ah iyo waxyaabo aan isku qasanayn oo ku jira budadaada. Hadaad goor dambe sameyso, si buuxda isuguma qasmi doonaan.
Si tartiib ah ugu dar caanaha / ukunta isku darka 3 qaybood, adoo u oggolaanaya in dufanka isku qasmo 10 ilbidhiqsi inta u dhexeysa ku darista. Jooji si aad u xoqdo baaquli mar labaad nuska. Duufkaagu waa inuu ahaadaa mid qaro weyn oo aan kala go'in. Haddii ay kala go'do, qaar ka mid ah maaddooyinkaagu waxay noqon lahaayeen kuwo aad u qabow ama waxaad ku dartay dareerahaaga si dhakhso leh.
Ku buuxi weelkaaga keega 3/4 buuxa dheriga doolshada. Sii digsiga xoogaa tuubbo dhinac kasta ah si aad iskaga dhigto baytarka oo aad uga takhalusto wixii naqas ah ee hawo ah. Waxa kale oo aad miisaami kartaa weelkaaga keega ah si aad u hubiso in digsi kastaa uu leeg yahay isku leeg dufanka keega.
Keegagga yaryar ayaa ka duugi doona si ka dhakhso badan keegagga waaweyn. Ka bilow 30 daqiiqo ilaa 6 'ama 8' keega oo ku dar waqti sidii loogu baahdo. Foornada kasta way ka duwan tahay sidaa darteed u hagaaji waqtigaaga dubista sida loogu baahan yahay. Keegagtu waa la dubay marka caday ka soo baxo xarunta si nadiif ah. Keega ka fogee foornada oo sii qasabad dusha ka saaran si ay hawadu u sii deyso ugana hortagto yaraansho badan.
Ka dib marka keega la qaboojiyo 10 daqiiqo ama digsiyada ay qabow ku filan yihiin in la taabto, ku duub keega dusha weelka qaboojiyaha oo ha qaboobo ilaa inta yar ee diirran. Keeggaaga ku duub duub balaastig ah kuna qabooji qaboojiyaha kahor dhaxan si ay ugu fududaato in la maareeyo. Sidoo kale waad ku ridi kartaa qaboojiyaha haddii aad ku deg degayso inay qaboojiyaan.
Marka keegaga la qaboojiyo hadda waad goyn kartaa, buuxin kartaa oo qurxin kartaa keegaaga sida aad rabto.
Tilmaamaha Liinta Curd
Keen ½ ”ilaa 1” oo biyo ah karkariyo digsi weyn
Baaquli weyn oo galaas ah ama baaquli bir ah oo aan fal-gal ahayn isku ururi jaallo ah, casiirka liinta, zest, sonkor, iyo cusbo. Dhig baaquli dheriga dushiisa.
Biyaha isku kari ilaa intaad isku kari kartid isku walaaq si joogto ah illaa ay ka sii adkaato oo heerkulkoodu ahaado qiyaastii 170ºF.
Isku xoq budada galleyda ah iyo biyaha si aad u sameysid dharbaaxo, ku dar isku darista xumbada, si joogto ah u walaaq una kari ilaa 1-2 daqiiqo oo dheeri ah ilaa inta hadhuudhku ka cadaanayo.
Ka saar curdarka dabka. Isla markiiba ku dar subaggaaga gaballo yaryar. Hoos u dhig ilaa ay ka siman tahay. Isku walaaq isku-darka si aad uga saarto wixii gogo 'waaweyn ee iniinyaha ama abuurka.
Ku dabool curdubka caaga ah si ay u taabato dusha sare ee curdanka iyada oo aan wax xumbo ahi u dhexayn, tani waxay ka hortageysaa in maqaar ka sameysto dusha sare ee curdanka. Qaboojiyaha illaa inta qabow ka hor intaadan isticmaalin.
Tilmaamaha Liinta Buttercream
Ku rid ukunta cad iyo sonkorta budada ah baaquli isku qasan oo leh lifaaqa ku dheji. Ku shub sare 2-3 daqiiqo si aad isugu darto.
Ku dar subagga qaybo yaryar ka dibna liinta laga soosaaray iyo cusbo. Ku karbaasha dusha sare illaa iftiin iyo cirro leh iyo caddaan. Ku dar liintaada liin isku dar ah isku dar. Ikhtiyaari ah: u wareeji lifaaqa weelka iskuna qas hoos illaa 15-20 daqiiqadood illaa dhammaan goobooyin hawo ahi ka baxayaan.
Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay inaad Ogaato Kahor Intaadan Bilaabin
Keen dhammaan waxyaabaha aad ka kooban tahay heerkulka qolka ama xitaa xoogaa diiran (ukumo, caano subag, subag, iwm) si loo hubiyo in dubkaagu uusan jebinayn ama uusan curricamaynayn.
U adeegso cabbir si aad u miisaamto maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareeraha) haddii kale haddii aan si kale loo farayn (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada.
Layliska Mise en Place (wax kasta oo meesha ku jira). Cabbiro maaddooyinkaaga ka hor wakhtiga oo diyaari iyaga ka hor inta aanad bilaabin isku-darka si loo yareeyo fursadaha si shil ahaan wax uga tagi kara.
Qabooji keegaaga kahor dhaxan iyo buuxin. Waad ku daboolan kartaa keega barafoobay oo la qaboojiyey si wanaagsan haddii aad rabto. Keeggan sidoo kale waa u fiican yahay isugeynta. Had iyo jeer waxaan ku hayaa keegayaga in aan ku qaboojiyo qaboojiyaha ka hor intaan la keenin si aan u raro.
Kalori:520kcal(26%)|Kaarboohaydraytyada:57g(19%)|Protein:4g(8%)|Dufan:32g(49%)|Dufan Dufan:kow iyo labaatang(105%)|Kalastarol:95mg(32%)|Sodium:189mg(8%)|Kalibaalium:97mg(3%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:Afar. Shang(konton%)|Vitamin A:920IU(18%)|Vitamin C:4mg(5%)|Kaalshiyamka:Afar. Shanmg(5%)|Bir:0.4mg(laba%)
Cuntadani liin macmacaanka ah ee laga sameeyay xoqda waxaa laga soo buuxiyay liin dhanaan oo guriga lagu kariyey oo lagu qaboojiyey liin dhanaanta subagga leh. Keeggaan waa mid weyn oo la garaacay xitaa haddii aadan aheyn liin jecel!
sida loo isticmaalo qalabka qurxinta keega
isugeynta qorfe strawberry oo leh liin dhanaan kareem
waa keega velvet casaan kaliya keega shukulaatada
sida looga sameeyo shukulaatada caaryada
sidee loo sameeyaa beenta haribo gummy